2GB 150W Led Linear Oge Mgbaaka China Manufacturer
Nkọwa:Ngwunye Linear Fixture,Led Linear Oge Mgbaaka,Enwetara ọkụ ọkụ na ntinye akwụkwọ
Home > Ngwaahịa > LED Linear High Bay Light > 2GB 150W Led Linear Oge Mgbaaka
Ihe Nlereanya.: BB-GKD-150W-2F
Power: 100W, 150W, 150W
Nke a 2ft Dugara Linear eletrik bu ndi na-azoputa ego, ike nke oma karia ihe omimi ma obu fluorescent T5. Ngwunye Line 150 a nke a na-ahọrọ maka ọkụkọ, ụlọ mgbakọ, na ngwa ngwa. Ejiri ihe nkedo nke ejiri kpochapu nke a na- eme ka a ghara ikpochapu ya, 120 ° Beam Angle na ihe eji eme ihe. Ihe ndekọ ndị a dị n'usoro na-enye ọbụna ìhè dị elu karia ihe eji eme ka fluorescent na-eme ihe na-erughị pasent 60 nke ikuku. Edere anyị na- edekọ na-enye ndụ 50,000 awa ma na-ebelata ọnụahịa mmezi ma dị na ntinye elu nke lumen site na 7800 ruo 39000 lumens.
Ihe omuma ndi ozo:
Ngwaahịa : LED Linear High Bay Light
100W Led Linear High Bay Lighting 5000K Kpọtụrụ ugbu a
160W Linear High Bay na-etinye ntanye ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
200W Linear Led High Bay Lake Light Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye Ngwunye Nwepu Mmiri Ntụkwasị Obi 300W Led Linear Kpọtụrụ ugbu a
400W Led Linear Pendant Lighting Kpọtụrụ ugbu a
100W Ejiri Nlekọta Ịgba Ọhụụ Maka Ụlọ Ọrụ Kpọtụrụ ugbu a
2GB 150W Led Linear Oge Mgbaaka Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa 200W Led Linear Low Bay Light Fixtures Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye Linear Fixture Led Linear Oge Mgbaaka Enwetara ọkụ ọkụ na ntinye akwụkwọ Ngwunye Linear High Bay Light Led Linear High Bay Fixtures Elu Bay Led Fixtures Gym Lighting Fixtures Ebube Highbay Fixtures